Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem UK » Cracks na ụgbọ oloko dị elu na-akpata 'ọgba aghara dị ukwuu' nke ọrụ ụgbọ okporo ígwè UK
Ndị na-ahụ maka ụgbọ oloko ebidola nyocha nke ụgbọ oloko ha ọsọ ọsọ mgbe achọtara mgbawa na ụgbọ
A dọrọ ndị njem aka na ntị banyere igbu oge na ịkagbu ọrụ
E mere mkpebi ahụ mgbe achọtara mgbawa ntutu isi n'oge mmezi oge niile na ụgbọ oloko Hitachi 800
Ihe karịrị ụgbọ oloko 1,000 sitere na ụgbọ mmiri GWR na LNER ka enyocha
The London North Railway (LNER), Hull insgbọ oloko, Great Western Railway (GWR) na TransPennine Express (TPE) akwụsịla ọrụ na London na ụtụtụ Satọde. Nke a pụtara na ọrụ ụgbọ oloko pere mpe n’etiti Edinburgh, Newcastle upon Tyne, York, na London.
Ndị na-ahụ maka ụgbọ oloko ebidola nyocha ngwa ngwa nke ụgbọ oloko ha dị elu mgbe achọtara mgbawa na ụgbọ ala. A dọrọ ndị njem aka na ntị banyere igbu oge na ịkagbu ọrụ.
Dabere na akụkọ mpaghara, ihe karịrị ụgbọ oloko 1,000 sitere na ụgbọ mmiri GWR na LNER ga-enyocha.
GWR dọrọ aka ná ntị banyere "ọgba aghara dị ịrịba ama," na ndị ọrụ ndị ọzọ na-ewepụta nkwupụta yiri ya.
GWR na LNER gbara ndị njem ume ka ha zere njem na Satọde n'ihi igbu oge na ịkagbu ya. PTE dụrụ ọdụ megide iji ụzọ Newcastle gaa Liverpool, ebe Hull insgbọ oloko gbara ndị njem ume ka ha nyochaa usoro njem ha.
Emere mkpebi a mgbe achọtara mgbawa ntutu isi n'oge mmezi oge niile na ụgbọ oloko Hitachi 800. GWR kwuru na mgbape ahụ "dị ebe usoro nkwụsịtụ na-agbakwunye ahụ ụgbọ ahụ."
"Achọpụtala ya na ụgbọ oloko karịrị otu, mana anyị amaghị kpọmkwem ụgbọ oloko ole n'ihi na a ka na-enyocha ndị otu ụgbọ mmiri ahụ," onye ọnụ na-ekwuchitere GWR kwuru.
Ndị ọrụ ahụ kwuru na Hitachi na-enyocha okwu a, na ozugbo emere nyocha ndị ahụ, ụgbọ oloko ahụ ga-alaghachi ọrụ ozugbo enwere ike.
N’ọnwa gara aga, GWR wepụrụ ụgbọ oloko isii nke ọrụ mgbe achọpụtara mgbape ntutu. Mana n'oge ahụ, nkwụsị ahụ emetụtaghị ọrụ ndị njem.